पर्वतारोहण पर्यटनको विकास र संस्थागत गतिशिलताका लागि एनएमएको नेतृत्व लिन चाहन्छु : लामा
प्रकाशित मिति: 2017/06/03
भूमि लामा, पूर्व उपाध्यक्ष –एनएमए
नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) मा चुनावी चहल पहल सुरु भएको छ । संघमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि यही असारमा निर्वाचन अधिवेशन गर्ने तयारीमा एनएमए कार्यसमिति लागेसँगै चुनावी चहल पहल सुरु भएको हो । नेतृत्वका लागि दावेदारी प्रस्तुत गर्दै आएका व्यवसायीहरु आफ्नो पक्षमा माहोल निर्माण गर्न यतिबेला छलफल र भेटघाटमा जुट्न थालिसकेका छन् । यसै सन्दर्भमा संघको आगामी नेतृत्वको दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै आउनु भएका पूर्व उपाध्यक्ष भूमि लामासँग गन्तव्य नेपाल न्यूजडटकमले गरेको कुराकानीः
तपाई आउदो अधिवेशनबाट एनएमएको अध्यक्ष बन्ने रेसमा हुनुहुन्छ भन्ने बजार हल्ला छ नी, के यो सही हो ?
हो, सही कुरा हो । म यसपटक एनएमएको अध्यक्ष पदको नेतृत्वका लागि आवश्यक गृहकार्यमा लागेको छु ।
मैले अघि पनि भने अहिले म यसको गृहकार्यमा छु । अव छिटै मेरा योजना र कार्यक्रमहरु पनि सार्वजनिक हुन्छन । तर अहिले भन्नु पर्दा मेरो उम्मेदवारी नेपालको पर्वतारोहण पर्यटनको विकास, पर्वतारोहण व्यवसायीहरुको हकहित र एमएमएको संस्थागत गतिशिलताका लागि म नेतृत्व लिन चाहन्छु ।
त्यसका लागि स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ कि प्यानल निर्माणमा लागिरहनु भएको छ ?
हेर्नुस्, अहिले हरेक क्षेत्रमा राजनीति व्याप्त छ । त्यो समस्याबाट एनएमए पनि मूक्त छैन । म भने व्यवसायीक संस्थालाई लिड गर्न व्यवसायीले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा वकालत गर्ने र गर्दै आएको व्यक्ति हु । संस्था चलाउन त्यसबारे बुझेका अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति चाहिन्छ । त्यसकारण म अहिले त्यस्ता साथीहरुसँग भेटघाटमा लागिरहेको छु । किन की संस्था त एक्लै चलाउने होइन र त्यो सम्भवन पनि छैन । त्यसर्थ एउटा विसुद्ध व्यवसायीक प्यानल निर्माण गरेर अघि बढ्छु ।
सहमति आधारमा नेतृत्व चुनिने सम्भावना कत्तिको छ ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता सहमतिय नेतृत्वकै लागि हुनेछ । अहिले म त्यही कसरतमा लागिरहेको छु । मलाई विश्वास छ मेरै नेतृत्वमा सहमति नेतृत्व चयन हुन्छ । किनकी पर्वतारोहण पर्यटनमा लागेका साथीहरुलाई थाहा छ मेरो अनुभव र कार्यक्षमताबारे । कार्यसमिति सदस्य, ३ पटक महासचिव र एक पटक उपाध्यक्ष भएर काम गर्दा मैले के कति काम गरे भन्ने कुराको साथीहरुले राम्रो मूल्यांकन गर्नु भएको छ । उहाँहरुलाई मेरो नेतृत्वले एनएमएमा राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ । त्यसकारण पनि सबैको सहयोग हुन्छ र मेरै नेतृत्वमा सहमति जुट्छ भन्ने विश्वास छ । यद्यपी भएन भने निर्वाचनमा सहभागि हुन्छु ।
नेतृत्व चाहि नछाड्ने ?
मलाई साथीहरुको साथ र सहयोग छ । अघि बढ्न हौसला दिनु भएको छ । त्यसकारण म यस पटक एनएमएको अध्यक्ष भएर यस क्षेत्रको हकहितमा काम गर्न इच्छुक छु ।
तपाईले देखेको पर्वतरोहण क्षेत्रका समस्यहरु केके हुन र ती समस्या समाधानका लागि तपाईको योजना के छ ?
पछिल्लो समय नेपालको पर्वतारोहण पर्यटन निकै समस्याहरुबाट गुज्रिन बाध्य छ । यस क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरु पनि छ । पछिल्लो समय एनएमएको पिक खोज्ने प्रयासहरु भएका थिए र अझै पनि त्यो जारी छ । त्यसले गर्दा पहिला त म त्यसमा लाग्ने छु । अर्को संस्था संचालनका लागि नुवाकोटको ककनीमा जग्गा उपलब्ध गराएको छ तर त्यसको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन् । त्यसको संरक्षण र हकभोगका लागि सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने छु । पर्वतारोहीहरुको क्षमता बृद्धिका लागि आवश्यक तालिम संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने हिमाली वातावरण दिनप्रतिदिन विग्रदो छ । जलबायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालहरु जोखिममा परेका छन् यसबारे तत्काल काम गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा पछिल्लो समय विभिन्न कारण एनएमएको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । त्यसलाई जोगाउन पनि म व्यवसायी साथीहरुसँग सहकार्य गर्दै काम गर्ने छु भने अहिले केही समय अघि मात्र संस्थाको आफ्नै कार्यालय भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ । त्यसका लागि पनि आवश्यक रकमको जोहो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । म र मेरो टिम यसमा कटिवद्ध भएर लाग्ने छौ । अन्य विषयमा व्यवसायी साथीहरुको सल्लाह र सुझावलाई मान्दै यस क्षेत्रको वृहत्तर विकासमा मेरो टिमले काम गर्ने छ।